सामाजिक संजालमा केपि ओलि र बाबुराम भट्टराईको “भ्यागुता र बाहुन” कथाको यस्तो जुहारी !
काठमाडौं- सामाजिक सन्जाल बहस गर्ने स्थान भन्दा फरक नपर्ला । यसले उच्च तहका ब्यक्ती देखि सबैलाई छोएको छ । यतिबेला सामाजिक सन्जाल बर्तमान प्रधानमन्त्री केपि ओलि र पुर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई बिच जुहारी नै चलेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार पार्टी मुख्यालय धुम्बराहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भ्यागुताको कथा सुनाए । तत्कालनी नयाँ शक्तिका नेताहरुलाई नेकपा भित्र्याउन आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्राईको विद्वता केही पनि होइन भन्ने कुरा बुझाउन ओलीले भ्यागुताको कथा सुनाएका हुन् ।
कथा यसरी सुरु हुन्छ !
कसैले भैंसी किन्न खोज्यो भने, दूध कति कति छ भनेर सोध्यो भने । -सिङ हेर्न सिङ कति राम्रो छ । यस्तै गरेर डिग्री हेर्न डिग्री डिग्री डिग्री । डिग्रीले क्रान्ती गर्ने होईन, निश्ठाले क्रान्ति गर्ने हो । दृष्टिकोणले क्रान्ति गर्ने हो । डिग्रीले सम्हालेन भने, सम्हाले राम्रै हुन्छ । सम्हाल्यो भने त्यसले ठिकै गर्छ । सम्हालिएर डिग्रीको सदुपयोग गर्‍यो भने राम्रै हुन्छ । तर दम्भ पाल्यो भने दम्भले अनेक प्रकारका ठक्करहरु दिन्छन । नेपालमा पि एच डि गरेका धेरै छन मानिलिउ एक जनाले मात्र पि एच डि गरेको जस्तो डाक्टर, डाक्टर, डाक्टर । त्यसैले धोका दियो ।
एउटा भ्यागुताको बच्ची घुम्न गैछ, बाछो देखिछ । आएर आमालाई भनिछ । यत्रो ठूलो जनावर रैछ, यत्रो ठूलो जनावर मैले त ठूलो जनावर देखे । हुन त बाच्छै थियो तर उसले देखिरहेकी आमा भन्दा कति हो कति ठूलो । भ्यागुतीले भनिछ कसरी हुन सक्छ म भन्दा ठूलो । यत्री, यत्रो थ्यो, अझ ठूलो, यत्रो थ्यो अझ ठूलो, अझ भुँडी फुलाई यत्रो थ्यो अझ ठुलो, झन भुँडी फुलाउदा भुँडी फुट्यो । अहिले भएको यस्तै हो ।ओलीको भ्यागुताको कथा सकियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको कथा सुनेपछी सबै जना मजाले हासे । प्रधानमन्त्रीको भाषण सकिएपछि सामाजिक सञ्जालमा भाईरल बन्यो । त्यसको केही समय पछि पूर्वप्रधानमन्त्रीको कथा शुरु भयो । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कथाकै शैलीमा जवाफ दिन निदुलीको कथा ट्वीटरमा पोस्ट गरेका छन् । भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।
हाम्रो पालामा तीन कक्षामा पढाइने घमण्डी भ्यागुतोको कथा हालेर प्रमले श्रोताहरूलाई हँसाउनुभएछ । त्यो संगै निदुली नाम गरेका बाहुन कसरी काकताली परेर ठूलो ज्योतिषी कहलिन पुगेका थिए भन्ने कथा पनि सुनाइदिएको भए अझ ठूलो हाँसो फुट्थ्यो कि? ’ निदुली बाहुन साँझमा ससुराली पुगेछन्। सासू भित्र सेलरोटी पकाउँदै रहिछन्।ज्वाइँ बाहिर पिंढीमा बसेर बाँसका सिन्का भाँच्दै रोटी गन्न थालेछन् । पकाइसकेपछि सासूले ज्वाइँलाई देखिछन् र चारवटा रोटी थालमा राखेर ज्वाइँलाई दिइछन् ।ज्वाइँले भनेछन् ‘रोटी पाके दुइ बीस चार, ज्वाइँका भागमा किन चार?’ठ्याक्कै रोटीको संख्या मिलेपछि गाउँभर सासूले ज्वाइँ अब्बल ज्योतिष भएको प्रचार गरिछन्।गाउँमा धोबीको गधा हराएको रहेछ।
धोबीले ज्वाइँसंग हराएको गधा पत्ता लगाइदिन भनेछन् । अब पर्यो फ़साद । भोलिपल्ट विहानैको शुभसाइतमा आउन आग्रह गर्दै मध्यरातमा सबैसुतेपछि ज्वाइँले टाप कसेछन्।भाग्दै जाँदा बाटोमा उखुवारीमा गधा चर्दै गरेको देखेछन् । के खोज्छस् दृष्टिविहीन, आँखा । ज्वाइँ ससुराली घर फर्केर सुतेछन् । भोलिपल्ट जोखाना हेरेझैं गरेर धोवीलाई गधाको इतिवृत्त बताएछन् । अब के चाहियो? निदुलीको ख्याति राजदरबारसम्म पुगेछ। राजाले दरबारमा बोलाएछन् र हराएका हीरा–जवाहरत पत्ता लगाउन भनेछन्।
बस्न कोठा दिएछन् । अब पर्यो महाफसाद भागौं, पहरा छ ।कोठामै बर्बराएछन्– ‘रोटी गनीगनी जैसी कहाएँ, धोबीको गधा उखुवारी पाएँ, अब आयो निदूली तेरै काल’ पल्लो कोठामा सुतेकी नोकर्नीले सुनिछ । उसको नाउँ पनि निदूली रहेछ । उसले रूँदै आएर भनिछ– ‘बाजे मेरो ज्यान बचाइदिनोस्, हीरामोती मैले चोरेर फलानो ठाउँमा राखेकीछु।’’निदूली राजज्योतिषी बनेर धनधान्य भएछन । अब आफै बुझौं हाम्रो अहिलेको राजज्योतिषी को हो ।’डा.बाबुराम भट्टराईको ट्विटर र सेतोपाटीले पोस्ट गरेको भिडयो बाट ।